लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नक्सा जारी गर्ने सरकारको तयारी, ओलीले गरे यस्तो प्रतिबद्धता — Sanchar Kendra
५उपचारका लागि भारत पुगेका डा.बाबुराम भट्टराईले दिल्लीबाटै दिए यस्तो प्रतिक्रिया
६सरकारले सुरक्षामा कटौती गरेपछि पूर्वराजा शाहका स्वकीय सचिवले गृहलाई पठाए यस्तो पत्र
लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नक्सा जारी गर्ने सरकारको तयारी, ओलीले गरे यस्तो प्रतिबद्धता
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नक्सा जारी गर्ने बताएका छन् । नेकपाको शुक्रबार बसेको सचिवालय बैठकले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नक्सा जारी गर्न सरकारलाई सुझाव दिएपछि उनले बैठकमा यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
नेकपा सचिवालयको आजको बैठकमा भारतले नेपाली भूमिमा मनपरी गरिराख्‍ने तर नेपालचाहिँ चुप लागेर बसिराख्ने ? भन्दै नेताहरुले आपत्ति जनाएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले तत्कालै नक्सा जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । पहिला नक्सा जारी गर्ने त्यसपछि वार्ता र कुराकानी हुँदै गर्छ भन्ने निष्कर्षमा प्रधानमन्त्रीसहितका नेकपा नेताहरु पुगेका छन् ।
बैठकमा सरकारले आज प्रस्तुत गरेकाे नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा छलफल भएको छ । नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा सचिवालयको धारणा माग गरेका थिए ।
पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनाललाई कसले दियो ‘सांसद’ बन्न प्रस्ताव ? आफैले गरे यस्तो खुलासा
फेरि घट्यो सुनको मूल्य, आज कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?
प्रचण्डसामु वामदेवले राखे यस्तो प्रस्ताव
उपत्यका नछोड्न सांसदहरुलाई प्रचण्ड–नेपालको निर्देशन, बाहिर भएकाहरुलाई पनि एकाएक किन बोलाइयो काठमाडाैं ?